४४ लाख तिरेर कमाउन पठाएकी छोरीको जव ‘मर्दैछु’ भनेर म्यासेज आयो ! -
Home समाचार ४४ लाख तिरेर कमाउन पठाएकी छोरीको जव ‘मर्दैछु’ भनेर म्यासेज आयो !
४४ लाख तिरेर कमाउन पठाएकी छोरीको जव ‘मर्दैछु’ भनेर म्यासेज आयो !
बेलायतमा रहने भियतनामी समुदायको वेबसाइट भियतहोमले आफूहरुले हराइरहेको भनिएका १५ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका २० जना भियतनामीको फोटो संकलन गरेको जनाएको छ । यदि भियतहोममा हराइरहेको भनेर रिपोर्ट गरिएका व्यक्तिले नै लरीभित्र ज्यान गुमाएको भए सबैभन्दा कम उमेरकी पीडित अहिले चर्चा भएकी मी भन्दा कम उमेरकी हुनेछिन् ।
हराइरहेकी एक भियतनामी किशोरीमो उमेर १९ वर्ष छ र उनका परिवारले उनी पनि यही लरीमा भएको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन् । भियतहोमले संकलित फोटो पुलिसलाई दिएको छ र उनीहरुको परिवारलाई ती फोटोहरु अनलाइन पोस्ट नगर्न भनेको छ ।